အင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်ဖို့ စကားပြောသင်တန်းတွေ ဈေးကြီးပေး တက်ဖို့လိုသလား – For her myanmar
အင်္ဂလိပ်လိုကျွမ်းကျင်ဖို့ စကားပြောသင်တန်းတွေ ဈေးကြီးပေး တက်ဖို့လိုသလား
Posted on October 20, 2017 Author Khine	Comment(0)
အင်္ဂလိပ်လိုလဲ ကောင်းကောင်းပြောတတ်ချင်တယ်၊ သင်တန်းတွေတက်ဖို့ကျပြန်တော့လည်း ဈေးကြီးလိုက်တာနော်…
ယောင်းတို့ရေ အင်္ဂလိပ်စကားပြော တိုးတက်စေဖို့ ကိုယ်ဘာသာ ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာ အက်ဒမင် အများကြီးရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ မေးစရာတစ်ခုရှိလာရော။ အင်္ဂလိပ်စာဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ လေ့လာရုံနဲ့ ပြီးပြီလား။ ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့ သေချာသင်ဖို့ရော မလိုတော့ဘူးလား။ တကယ်တန်းကျ ဆရာမပြနည်းမကျဆိုတဲ့ စကားလဲ ရှိသေးတယ်လေ။ ကဲ… ဒီလိုဆို ဆရာလိုမလို တို့တွေ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်လား။
ယောင်းတို့တွေအားလုံးဟာ ငယ်ငယ်တည်းက အင်္ဂလိပ်စာကို ကျောင်းမှာသင်လာရတာမို့ ခေသူတွေတော့ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ရှစ်တန်းလောက်မှာ ကတည်းကစသင်တဲ့ သဒ္ဒါပုံစံတွေကိုတော့ အကုန်မှတ်မိချင်မှ မှတ်မိလိမ့်မယ် (အက်ဒမင့်လိုပေါ့ ဟီး) ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်လိုလုံးဝမတတ်တဲ့ သူတွေဘယ်ဟုတ်မလဲ။ အစိမ်းသက်သက်ကြီးတော့ ဟုတ်ဘူးလေ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အတန်းထဲမှာ စာပိုဒ်လိုက်တွေ အော်ခဲ့တဲ့ စပီကင်စကေးတွေ၊ ဖတ်စာအုပ်ထဲက ဝတ္ထုအပိုင်းအစလေးတွေကို ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာဖတ်တဲ့စကေးတွေ ရှိကြတယ်မလား။ ပြောပါတယ် ခေသူတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့။
ဒီလိုဆိုပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တက်ဖို့လိုလားလို့ မေးလာခဲ့ရင် လိုလဲလိုတယ် မလိုလဲမလိုဘူးလို့ပဲ ဖြေပါရစေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ချို့တွေက အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံရှိသော်ညား မသုံးတာကြာလို့ မေ့သွားကြတဲ့အခါ ပြန်ပြီး အစဖော်ပေးဖို့လိုတယ်လေ။ တစ်ချို့ကကျ စာတွေမမေ့သေးဘူး ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့တူတူ စကားလိုက်ပြောပေးမယ့် လေ့ကျင့်ဖော်လိုပြန်ရော။ အဲ့လိုတွေဆိုရင်တော့ အခြေခံလေးတွေပြန်ပြီး သင်ပေးမယ့်ဆရာနဲ့ ကိုယ်နဲ့ စကားတွေပြောပေးမယ့် လေ့ကျင့်ဖော်တွေရှိမယ့် သင်တန်းတစ်ခု တက်ဖို့လိုနေပြီပေါ့။
Related article >>> စာအုပ်တွေဖတ်ရုံနဲ့လည်း အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဆိုတာ ယောင်းတို့သိပါသလား။
တကယ်တော့ သင်တန်းမတက်လဲ ရပါတယ်။ အက်ဒမင်ပြောခဲ့သလို စာအုပ်တွေဖတ် – အသံပါထွက်ပြီးဖတ်၊ ရုပ်ရှင်တွေ နာနာကြည့်၊ နားထောင်တဲ့စကေး မြင့်လာအောင် podcast တွေ သီချင်းတွေနားထောင်။ ကဲဘာလိုသေးလဲ။ အက်ဒမင်လဲ ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခဲ့တာ ယောင်းရဲ့။ အခုတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ စကားတွေအများကြီး အပြန်အလှန်ပြောရတဲ့ အလုပ်ထဲမှာ အဆင်ပြေနေပြီလေ။
ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လဲ ကိုယ့်ဘာကိုယ် သင်တန်းလိုမလို ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပြီ ထင်ပါတယ်။ အက်ဒမင်အခု ထပ်ပြောချင်တာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အင်မတန်မှ သင်တန်းကြေးဈေးကြီးတဲ့ နေးတစ်ဗ်စပီကာတွေသင်တဲ့ သင်တန်းတွေပါပဲ။ ဒီလိုသင်တန်းတွေက နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဗန်းပြပြီး ဈေးကြီးကြီးတောင်းနေကြပေမယ့် အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေ အားလုံးဟာ ဆရာဖြစ်သင်တန်းဆင်းတွေတော့ မဟုတ်ကြဘူး။
Related article >>> ဘိုလိုမှုတ်ရအောင်
အက်ဒမင့် အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းက နိုင်ငံခြားသားဆရာအများစုက သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်က ဒီမှာအလုပ်လာလုပ်တော့ လိုက်လာရင်း အဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာ အလုပ်ဝင်ကြတာပါ။ ကျောင်းတွေကလဲ နေးတစ်ဗ်စပီကာဆိုတော့ ကျောင်းမျက်နှာပြလှတယ်ဆိုပြီး လခများများနဲ့ ငှားထားကြတာပေါ့။ တစ်ချို့တွေကျ တကယ့်ဆရာ၊ဆရာမ အစစ်တွေလဲရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အက်ဒမင်သတိပေးချင်တာက ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး သင်တန်းတက်သင့် မတက်သင့်ဆိုတာလည်း ယောင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သလို အဲ့ဒီသင်တန်းမှာသင်မယ့် ဆရာ၊ဆရာမတွေရဲ့ အရည်အချင်းကို သေချာစုံစမ်းဖို့ကလည်း ယောင်းရဲ့တာဝန်ပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
အခုခေတ်ကတော့ ပညာခေတ်ဖြစ်နေသလို နိုင်ငံခြားက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ အများကြီးလဲရောက်လာကြတာမို့ အင်္ဂလိပ်စာက အရေးပါလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အက်ဒမင်ကတော့ ကိုယ့်ယောင်းကလေးတွေကို အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်အောင် သင်ထားစေချင်တယ်။ ဒီလိုသင်ရာမှာ အက်ဒမင်ပြောဖူးတဲ့၊ ဆက်ပြောဦးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်လေ့လာလို့ ရသလို သင်တန်းတွေတက်လဲ မြန်မြန်တတ်နိုင်တာမို့ ကိုယ်နဲ့အဆင်အပြေဆုံးလမ်းကို ရွေးကြဖို့ပါပဲ။ ယောင်းတို့ ဝေခွဲမရဖြစ်နေရင် For Her Myanmar က အက်ဒမင်တွေကို လာပြီဆွေးနွေးလို့ရတယ်နော်။
ယောင်းတို့တွေ အင်္ဂလိပ်စာပိုကျွမ်းကျင်လာပြီ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးတက်လာနိုင်ကြပါစေကွယ်။
Tagged English, Knowledge
Posted on September 29, 2017 Author Khine
နိုင်ငံခြားသားတွေ မျက်လုံးပြူးသွားရအောင် အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မပြောချင်ဘူးလား…
Posted on January 26, 2017 Author
အချိုရည်ကွင်းလေးတွေကို စုဆောင်းပြီး ပရဟိတ လုပ်လို့ရတာကို သင်သိပါသလား??အချိုရည်ဘူးကွင်းလေးတွေကို လှူဒါန်းခြင်းအတွက် ဘယ်သူတွေကို အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသလဲ?? အဲဒီအဖြေတွေ ဒီမှာရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းပရဟိတတွေ လုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြပါပြီ။ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်ဖြင့် လှူဒါန်းမှုမှာ ကမ္ဘာ့ နံပါတ် တစ် ဆိုတဲ့နေရာကို နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ရရှိထားတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံသူဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ ပရဟိတ ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာ ဆန်းတော့ မဆန်းလှပါဘူး။ ပျိုမေတို့ကိုလည်း ကျွန်မ အခုလုပ်နေတဲ့ ပရဟိတလေးအကြောင်း မျှဝေပါရစေရှင့်။အဲဒါကတော့ သံကွင်းလေးတွေ စုဆောင်းပြီး လှူဒါန်းခြင်းပါပဲ။အလဟာသ ဖြစ်နေတယ်လို့ လူအများထင်တဲ့အရာလေးတွေက တစ်ချို့ လူတွေအတွက်ကတော့ အရမ်းအဖိုးတန် လှပါတယ်။ သံကွင်းလေးရဲ့ထူးခြားချက် ဒီသံကွင်းလေးတွေက ခြေတုလက်တု ပြုလုပ်ဖို့အတွက် အလွန်အသုံးဝင်တာကြောင့်ပါ။ ::: အဲ့ဒီကွင်းလေးတွေကို aluminium နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ::: အရည်ကျိုဖို့အလွယ်ဆုံး..သတ္တုအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ကွင်း၂၅၀၀ […]
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ ပိန်သွယ်နေမှလား? ကိတ်နေမှလား?
Posted on March 14, 2017 January 31, 2019 Author Rosie
တကယ့်တကယ် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာက….
တိချစ်သူယောင်းယောင်းတို့ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကား (၄)ကား
ဟိုတယ်တွေဆို ဒါကြောင့် မတည်းရဲတာ… :(